योगेश भट्टराई भन्छन्- राजनीतिमा मध्यमार्ग... :: सन्जिब बगाले :: Setopati
सन्जिब बगाले काठमाडौं, असार २४
नेकपा भित्रको विवादबारे सेतोपाटीसँग बुधबार कुराकानी गर्दै उनले आवश्यक परेको बेलामा एकतिर उभिनै पर्ने बताए।
'हामीजत्तिको मान्छेले के भन्नुपर्छ भने राजनीति प्रष्ट हुन्छ। राजनीतिमा कहाँ हुन्छ मध्यमार्ग? तपाईं कहिँ न कहिँ उभिनै पर्छ,' उनले भने,'तर त्योभन्दा पहिले जब अनावश्यक ढंगले कहीँ उभिने पर्ने अवस्था आउँदैन भने किन उभिने? पार्टीको निर्णायक बेलामा आफ्नो मत जाहेर गर्ने क्रममा हामी भाग्दैनौं।'
'हिजो पार्टी एकता गर्ने क्रममा पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरूको समझदारीमा जिम्मेवारी र पद विभाजन भएको हो। त्यसमै समस्या छ भने तलका नेता/कार्यकर्तालाई किन साक्षी बकाउने?' उनले भने,'हिजो दुई अध्यक्ष बन्ने बेलामा कोही साक्षी बकेन। आज किन कार्यकर्ता विभाजन हुने? यसमा हाम्रो तहबाट केही गर्न सकिन्छ भने हामी तयार छौं।'
- हरेकले पार्टी निर्णय मान्नुपर्छ। यो सामान्य अवस्था होइन। यतिबेला अल्पमत र बहुमतभन्दा पहिला अरू विकल्प सोच्नपर्छ। विकल्पमा पुग्न सकिँदैन भने पार्टी बन्धक भएर बस्न सक्दैन। पार्टीले आफ्नो कोर्स लिन्छ त्यो कोर्स प्रधानमन्त्रीका निम्ति अप्रिय हुनसक्छ अथवा अरू नेताका लागि अप्रिय हुनसक्छ तर त्यहा पुग्नुभन्दा पहिला सबै अरू उपाय लगाउनु पर्छ।
- हामी दोस्रो तहका नेताकै छलफलले बैठक स्थगित गरेर टुटेको संवाद सुरू भएको हो। हामीले अरु गर्न नसके पनि संवादहीनतालाई तोडेका छौं। तर परिणाम नआइकन यसै भन्न सकिँदैन। जस्तोसुकै प्रतिकूल परिणाम पनि आउन सक्छ। त्यो आउन नदिन हरेक प्रयास गर्नुपर्छ।
- नेताहरूमा सूचनाको आधिकारिकतामा समस्या छ। एकका विरूद्ध अर्कालाई उचालिन्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सम्बन्धमा यस्तै भयो। अरू नेताहरूले पनि अनावश्यक आशंका गरेका छन्। यो सबै सूचनाकै आधिकारिकतामा आएको समस्याले भएको हो।
हेर्नुस् मन्त्री भट्टराईसँग गरिएको विस्तृत भिडिओ कुराकानी:
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २४, २०७७, १८:४८:००